आइफोन एटबाट थ्री डी सेल्फी खिच्न सकिने ! – Tech4Nepal
Iphone, New Technology
आइफोन एटबाट थ्री डी सेल्फी खिच्न सकिने !
Date: February 24, 2017Author: tech4nepal0Comments
एप्पलको आइफोन सेभेन प्लसमा रहेको क्यामरालाई फोटोग्राफीको भविष्य ठानिएको थियो । तर एप्पलको दशौँ वर्षगाँठका अवसरमा सार्वजनिक गरिने नयाँ आइफोनको प्रविधि झनै क्रान्तिकारी हुनेछ ।
एप्पलको आगामी संस्करणको आइफोन, जसको नाम आइफोन एट हुने अड्कल काटिएको छ, त्यसमा यस्तो सेल्फी क्यामरा हुनेछ जुन इन्फ्रारेड मोड्युल रहनेछ र त्यसले थ्री डी सेल्फी खिच्न सकिनेछ ।
यो प्रविधि सेल्फी खिच्नेसँगै फेसिएल रिकग्निसन वा आइरिस स्क्यानिंगमा पनि प्रयोग हुनेछ ।
एप्पलको आइफोन एटका बारेमा विभिन्न जानकारीहरु सार्वजनिक गरिरहेका के जि आइ सेक्युरिटिजका विश्लेषक मिंग ची कुओले हालै लगानीकर्ताहरुलाई एउटा नोट लेखेका छन् । उनले एप्पलको आगामी आइफोनमा हुने प्रविधिलाई क्रान्तिकारी भनेका छन, जुन विभिन्न एप्लिकेसनमा प्रयोग हुनेछ ।
इो प्रविधिले प्रयोगकर्ताको अनुहारलाई कम्प्युटर एनिमेटेड पात्रमा राख्नेछ । थ्री डी सेन्सर सहितको सेल्फी क्यामराको सहयोगमा आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ना सेल्फीलाई अगमेन्टेड रियालिटीमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै यसलाई आइफोन अनलक गर्ने फेसियल रिकग्निसन तथा आइरिस स्क्यानरमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
आइफोनको हार्डवेयरले प्राइम सेन्स कम्पनीले विकाश गरेको एल्गोरिदमको प्रयोग गर्नेछ । सन् २०१३मा एप्पलले खरीद गरेको यो कम्पनीले माइक्रोसफ्टको किनेक्ट गेमिंग सिस्टमका लागि मोसन सेन्सिंग प्रविधि बनाएको थियो ।
आइफोन एट अहिलेसम्मकै महंगो फोन (मूल्य १ हजार डलर भन्दा बढि) हुने यसअघि विभिन्न समाचारहरु आएका थिए । थ्री डी स्क्यानरकै कारण पनि यो फोनको मूल्य १० देखि १५ डलर बढि पर्न जानेछ ।कटिंग एज टेक्नोलोजी, ओएलइडी डिस्प्ले, काँचको खोल तथा वायरलेस चार्जिंग जस्ता प्रविधिहरुले गर्दा आइफोन एटको मूल्य उच्च हुने अनुमा गरिएको छ । एजेन्सी
Previous Previous post: Bill Gates warns tens of millions could be killed by bio-terrorism
Next Next post: The Best Smart Home Devices of 2017